ဖိုးတေ | Lionslayer : The Legend
နေတက် ရေတက်မှာ မွေးတဲ့ ကလေး တိုးတက်ဦးမယ်ဟုဆိုကာ ဘကြီးဘုန်းကြီးက မောင်တိုးဟု အမည်ပေးသည်။ အဖေက အဘိုးနာမည်ပါအောင်ဟုဆိုကာ ဖေတိုးဟု သမုတ်သည်။ အမေက အဖေ့ဘက်နေသဖြင့် ဖေတိုးအမည်ရလေသည်။ သို့ရာတွင် တွင်သည်ကား ဖေတိုးမဟုတ်။ ဖိုးတေဟူ၏။ ဖိုးတေ၏ မိဘများသည် သူကြီးမျိုးရိုးဖြစ်သည်နှင့်အညီ ရွာတွင် ဩဇာညောင်း၏။ သူကြီးခေတ် မရှိပြီဖြစ်ငြားလည်း လယ်ပိုင်၊ နွားပိုင် ရွာမျက်နှာဖုံးဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ကား မနည်းလှ။ ထိုထိုဂုဏ်တို့ဖြင့် အများတကာ၏ ဖူးဖူးမှုတ်ခံရသော ဖိုးတေသည် လူကြီးတွေ့လျှင် ဆိုးချင်၏။ ရွယ်တူကလေးတွေ့လျှင် အနိုင်ကျင့်ချင်၏။ ကလေးမိဘများက တိုင်ပါများသောကြောင့် အဖေက ကြိမ်လုံးကိုင်လျှင် ဖိုးတေသည် ရွာဦးကျောင်းသို့ပြေး၍ ကျောင်းထိုင်ဖြစ်သူဘကြီးဘုန်းကြီး၏ သင်္ကန်းအောက်ပုန်းလေ၏။ ထိုအခါ နောက်မှလိုက်လာသောအဖေသည် ဒီကောင်ကွာ ဟုတစ်ခွန်းသာပြောလျက် ဆရာတော်ကို ဦးချကာ ပြန်လေ၏။ ဆရာတော်သည် သံယောဇဉ်အပေါင်းကို ဖြတ်လျက် သင်္ကန်းဝတ်လာသော်ငြား ဖိုးတေက ဘုန်းဘုန်းဘုရာ့ ဟုအနားကပ်လာပြီး အသံစာစာဖြင့် ချွဲလျှင် သဘောကျလျက်နေလေ၏။
ဖိုးတေ ကျောင်းနေသော် ဆရာဆရာမများကအစ မည်သူမှ အမည်ရင်းကို မခေါ်။ ဖိုးတေသာ ခေါ်ကြလေ၏။ ကျောင်းတွင်လည်းဆိုး၏၊ ပေ၏၊ အနိုင်ကျင့်၏၊ လူမှန်လျင် ကျောင်းရှိ ဆရာမလေးယောက်နှင့် ကျောင်းအုပ်ဆရာလေးမကျန် နောက်ဖို့သာချောင်းနေ၏။ ကြာသော် ဖိုးတေသည် အမည်ရင်းကိုပင် မေ့တေ့တေ့ရှိကာ ဖေတိုးခေါ်လျှင်မထူး ဖိုးတေခေါ်မှ ထူးလေ၏။ ပညာရေးတွင် ပျင်းရိသူဖြစ်လင့်ကစား ဖိုးတေသည် အမြဲအဆင့်ကောင်း၏။ မိဘနှစ်ပါးကား ဂုဏ်ယူမဆုံးတည်း။ ဆရာတော်သည် ကျောင်းအားရက်များတွင် ဖိုးတေအား ခေါ်ကာ မင်္ဂလသုတ်၊ ပဋ္ဌာန်း (၂၄) ပစ္စည်း အစရှိသည်တို့သင်ပေးကာ ပရိတ်သတ် ရှေ့မှောက်၌ ရွတ်ဆိုခိုင်း၏။ ဖိုးတေက အထစ်အငေါ့မရှိရွတ်ပြသော် ဆရာတော်ကား တပြုံးပြုံးနေလေ၏။ မူလတန်းအောင်သော် တစ်ရွာကျော်ရှိ တွဲဖက်အထက်တန်းကျောင်းသို့ သွားတက်ရ၏။ ခရီးဝေးသည်ဆိုကာ အဖေက စက်ဘီးတစ်စင်းဝယ်ပေး၏။ မောင်ဗမာဟူသတည်း။ စက်ဘီးကား မြင့်သည့်အပြင် ဘားတန်းလည်းပါသေး၏။ ရွာတွင် စက်ဘီးရှိသူဟူ၍ ရွာကျောင်းအုပ်၊ ဆေးမှူးနှင့် ဖိုးတေသာ ဖြစ်၏။ စက်ဘီးစီးကား သင်ပေးစရာမလို။ မနက်ကတည်းက စက်ဘီးဆွဲဲထွက်သွားရာ ညနေစောင်းတွင် မဏိကွမ်းစားလျက် စက်ဘီးဘေးထိုးစီးကာ ပြန်​ေရာက်လာလေ၏။ အာဂဖိုးတေတည်း။ ရှစ်တန်းရောက်သော် ရွာ၌ ပထမဆုံး ထော်လာဂျီမောင်းတတ်သူကား ဖိုးတေသာဖြစ်ပေ၏။ ကျောင်းအားရက်တွင် ထော်လာဂျီကို ရွာနီးချုပ်စပ် ပတ်မောင်းကာ ရှိသမျ အပျို မကျန်အောင် ပတ်၍ လူပျိုလှည့်လေ၏။ မိဘနှစ်ပါးကား ထော်လာဂျီစာမိသွားသော ဆိတ်ပိုင်ရှင်များအား လျော်ကြေးပေးရသည်တဖုံ၊ စာပေးခံရသော သမီးရှင်များကို တောင်းပန်ရသည် တစ်မျိုးနှင့် ဖိုးတေဆိုးသမျ မရိုးရအောင် ခံကြရလေ၏။ ဖိုးတေသည် ဆိုးသော်လည်း မိုက်သည့်ထဲမပါ။ ဆရာတော်တစ်ချက်ငေါက်လျှင် အပိုးကျိုးလေ၏။ ကွယ်ရာတွင်ကား ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်တည်း။
ဖိုးတေဆယ်တန်းအောင်သော် နှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးပါသဖြင့် ရွာတွင် ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်ဖြစ်သူဟူ၍ တစ်ရွာလုံး ဂုဏ်ယူကြ၏။ အဆင့်မြင့်ပညာတို့ကို ဆည်းပူးရန် ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်သို့ရောက်၏။ မြို့သစ်ရှိ အသိဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဝေယျာဝိစ္စလုပ်ရင်း အိုင်တီဟူသော ပညာတို့ကို ဆည်းပူး၏။ မိဘတို့ သားငယ်အကြောင်းကြားရသော် ဝမ်းသာမဆုံးတည်း။ ကွန်ပျူတာမသိ အင်တာနက်မသိသော်ငြား မိမိတို့ မသိသည့် အံ့ဘွယ်ဘနန်း ပညာတို့ကို ဆည်းပူးနေသည်ဟူ၍ ဂုဏ်ယူမဆုံး ဖြစ်ကြ၏။ ဘကြီးဘုန်းကြီးကား အာဂလူဟု ချီးကျူးလေ၏။ နှစ်အတန်ကြာသော် အိုင်တီပညာရပ်တို့ကို ဟိုစပ်စပ် သည်စပ်စပ် တတ်မြောက်လာ၍ နိုင်ငံခြားအလုပ်သွားလုပ်ချင်ပါသည်ဟု မိဘတို့ထံပူဆာ၏။ မိဘတို့မှာ တစ်ဦးတည်းသော သားငယ်အား ရပ်ဝေးပြည်ခြားသို့ မလွှတ်ချင်သော်ငြား ဘုန်းဘုန်းက အားပေးသဖြင့် ရှိသည့် လယ်အချို့ကို ပေါင်နှံရောင်းချကာ အေးဂျင့်တည်းဟူသော သူတို့မှတဆင့် အရောက်ပို့လိုက်ကြလေသည်။
မလေးရှားတွင် တစ်နှစ်ခန့်ကြာသော် စင်္ကာပူ ကူးချင်ပါသည် ဖြစ်လာ၏။ သူ့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတို့ စင်္ကာပူတွင် ကောင်းစားနေသည့်သတင်းကြားလျင် မလေးတွင် သည်မောင် မနေနိုင်တော့ပြီ။ တစ်နှစ်စာ လုပ်ထားသည့်အထုပ်ပိုက်ကာ စင်္ကာပူသို့ ခုန်ကူးလေ၏။ စင်္ကပူတွင် စီးပွားပျက်ကပ်နှင့် တိုးသဖြင့် အလုပ်ရှာမရ။ သူ့အသိတို့ အလုပ်မရ၍ တဖြုတ်ဖြုတ်ပြန်ကြသည်ကို တွေ့လျင် စိတ်ဓာတ်ကျလာ၏။ တစ်လရှာလည်း အလုပ်မရ နှစ်လရှာလည်း အလုပ်မရနှင့် နောက်ဆုံး မလေးရှားပြန် စတေးရှောင်ခါနီးတွင်မှ အဲယားကွန်းလိုက်ပြင်သည့်ဆိုင်တွင် အလုပ်ရ၏။ ပျော်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း။ ပဉ္စင်းထွက်စဉ်က ထိုမှမပျော်။
သားတော်မောင် အဆင်ပြေသည့်သတင်းကြားလျင် အမေလည်းပျော်၏၊ အဖေလည်းပျော်၏။ ဘဘုန်းဆိုလျင် တရားဟောလျင် နိုင်ငံခြားရောက် တူတော်မောင် တော်ကြောင်းကောင်းကြောင်း ထည့်ထည့်ဟောကာ ဟိမဝန္တာချီးမွမ်းခန်းဖွင့်ရသည်မှာ အမော။ မိဘတို့မှာ တစ်လတန်သည် နှစ်လတန်သည် မြို့တက်ကာ ဖိုးတေကြိုက်တတ်သည့် အစားအစာ အခြောက်အခြမ်းလေးများလည်း လူကြုံထည့်ပေးရသည်ကို ကရိကထ များသည်မထင်၊ ပီတိဖြာ၍သာ နေကြလေ၏။ ဖိုးတေမှာကား အလုပ်ရခါစက တစ်ကြိမ်၊ သီတင်းကျွတ်တွင်တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်မျသာ ငွေပို့ဖူးလေ၏။ လခလည်း နည်းလှသည် မဟုတ်ပါလော။
စင်္ကာပူတွင် တစ်နှစ်ခန့်ကြာသော် ဖိုးတေ အလုပ်ပြောင်းလေသည်။ ယခု ဖိုးတေ အဲယားကွန်းမပြင်တော့ပြီ။ နက်ဝပ်အင်ဂျင်နီယာ ဟူသော အမည်သစ်ဖြင့် ခေါင်းတမော့မော့ ရင်ကော့နိုင်ပြီဖြစ်၏။ အားလပ်ချိန်တို့တွင် အချိန်ပေးလေ့လာခဲ့သော အကျိုးကျေးဇူးတို့တည်း။ လစာလည်း များလာပြီဖြစ်၍ ဖိုးတေ လက်ယားလာလေသည်။ အိုင်ဖုန်းဟူသည်ကို စကိုင်သော်အပေါင်းအသင်းများကြားတွင် အင်မတန်ထင်ပေါ်၏။ နာမည်ကြီးအိုင်ဖုန်းကို မမြင်ဖူး မတွေ့ဖူးကြသည့်အလား ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြ၏။ ယင်းကိုပင် ဖိုးတေ သဘောကျ၍ နေလေ၏။ အိုင်ဖုန်းဖိုးထွက်သော် နောက်မကျစေရ ဖုန်းအမြန် လဲ၍ ကိုင်ပြန်လေ၏။ အိုင်ပက်ထွက်သော် ထမင်းဖိုးချွေတာ၍ ဝယ်ကိုင်ပြန်လေ၏။ ကင်မရာ၊ မက်ဘုတ် စသည်တို့လည်း မလွတ်စေရ၊ အက်ပဲလ် ကန်နွန် အစရှိသည်တို့ကို ပေးဝေငှ၏။ ရသမျလခ စု၍ ဝယ်လေသည်။
မိဘတို့မှာ အသက်လည်းထောက်ပြီဖြစ်၍ ငယ်စဉ်ကလို ကောင်းစွာ မလုပ်ကိုင်နိုင်တော့ဘဲ မြေများကို သီးစားချကာ စားနေကြရလေသည်။ အဖေလည်း ဒူလာဒဏ်ဖိစီးသဖြင့် နာတာရှည်တပိုင်း ဖြစ်နေလရာ အမေသာ အစစအရာရာ စီမံနေရတော့သည်။ သို့သော် သူတို့သားတော်မောင်ကို အများက မကောင်းပြောလျင် မခံနိုင်ကြ။ ငွေနှစ်ကြိမ်ကန်တော့ထားသည်ကိုလည်း​ေကာင်း၊ တစ်ခုသောနွေတွင် ရွာအရောက်တစ်ပတ်ခန့်ပြန်လာသော နိုင်ငံခြားရောက် သားတော်မောင်ကောင်းကြောင်းကိုလည်းကောင်း မစားရဝခမန်း ပြောကြလေ၏။ စင်္ကာပူငွေစျေးက ကျနေတယ်မဟုတ်လား ဘယ်ပို့နိုင်မတုန်းဟု ရှာကြံ၍ ဆင်ခြေပေးကြလေ၏။
ဖိုးတေ ရည်းစားရသောနေ့တွင် ရင်တို့သည် ဒိန်းချပ် ဒိန်းချပ်နှင့် ခုန်၍နေ၏။ မိန်းကလေးကား ကျောင်းသူဖြစ်၏။ သူ့ကို အစ်ကိုတိုးဟု ခေါ်၏။ ပိုးကြေးပန်းကြေးတို့ဖြင့် ငွေပိုကုန်သည်ကို မနှမြော။ အများနည်းတူ သူလည်း လူရာဝင်ပြီဖြစ်လေ၏။ ဖိုး​ေတ သည်နှစ်အကုန်တွင် လခတိုး၏။ လခတိုးသည့် အထိမ်းအမှတ်နှင့် အိုင်ဖုန်းဖိုးအက်စ်ဝယ်၏။ အိုင်ပက်တူးဝယ်၏။ သူငယ်ချင်းများကို ဘီယာအဝတိုက်၏။ ရည်းစားနှင့်အတူ တစ်မြို့လုံးပတ်၍ စျေးဝယ်ထွက်ကြလေ၏။
ဖိုးတေသည် မကြာမီ အိုင်ပက်သရီးဝယ်မည်ဟု တွေးသည်။ ကင်မရာမှာ လန်းစ်ကောင်းကောင်းဝယ်တပ်မည်ဟု ကြံသည်။ ကွန်ပျူတာမှာ မန်မိုရီထပ်တိုးရမည်။ ဘကြီးဘုန်းကြီးပို့ထားသော စာသည် စားပွဲပေါ်က စာအုပ်ပုံကြားမှ တစ်ပိုင်းတန်းလန်းထွက်ကျနေ၏။ စာထဲတွင် ဘုန်းကြီးက “ဖိုးတေ လောကစည်းစိမ်တွေနောက် သိပ်မလိုက်နဲ့” ဟု ဆုံးမထား၏။ ဖိုးတေသည် မမိုက်၊ သို့သော် ဆိုး၏။
10 Responses to “ဖိုးတေ”
The two files are on ifile.it and the link is – http://ifile.it/ojn72xc
Please check them out and advice. Thank you.
Thanks. I am using MS Word 2007. I will try and find 2010 or 2011 ver. I will try and upload the link later. The file is in another computer. Thanks for your fast response. The fonts in WinWord 2010 looks perfect.
BTW what keyboard can I use in Windows 8 for Myanmar font input? I.e., Myanmar3 or Myanmartext font.
Windows 8 includesaMyanmar layout which looks like Myanmar3std layout. But it is non-smart keyboard. You need to carefully type the Unicode sequence if you know how to. You can use keymagic software which has many built-in Unicode layouts.
ဖိုတေကိုကြိုက်လို့ကူးတာ wordpad မှာရပါတယ်။ MS word / epub မှာပုံမှန်မပေါ်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကူညီပေးပါအုံးခင်ဗျား၊ ကျေးဇူး
You may need to set the font format with one of Unicode fonts. For epub, you need embed the unicode font. You can use mmepub.
I like the slayer part. I have tried many many times with new mmepub where you can set your own preferred font in the parameter. But it does not work. First I need to import the text into MS word at which point Myanmar3 font does not render properly. I tried to include the screen shot here but I can not embed the file.
I checked the css generated by mmepub but could not find any problem ( I may not know where the problem is).
I am writing this in Windows 8 where I have seen the myanmartext font which is quite good looking. That is also not rendered properly. When it is imported into Notepad it is quite Okay but once it is copied into MS Word then the rendering is not correct. I believe you haveagood idea from your articles on Myanmar Unicode and Windows 8 Hope you could guide me to the correct path. Thanx
I just downloaded MSWord 2010 and tested. Myanmar3 works fine. You can upload the image somewhere else and paste the link here.
တို့များတော့ အိုင်ပက်သရီးဝယ်ရန် ရွာထိပ်က ငါးကန်လေလံခေါ်လျှင် ဝင်နွဲရဦးမည် အိုင်များများပက်နိုင်မှ အိုင်ပက်သရီး ကိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
LeaveaReply to MHK99